2015ပြီလ2| 55 ၏စာမျက်နှာ 2020 | NAB သတင်းများ | XNUMX NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
Virtual Operations ပါဝါပထမ ဦး စွာ ၂၄/၇ အခမဲ့လေကြောင်းကင်ညာကလေးကွန်ယက်
Spotify သည် 'Spotify Singles' Playlist ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန် DPA သို့ပြောင်းသည်
NAGRA NexGuard Forensic Watermarking သည် NAB Show Express တွင်အနာဂတ်အကောင်းဆုံးဆုနှစ်ဆုရရှိခဲ့သည်
subtitle သင်တန်းများအတွက်ဝါဆောတက္ကသိုလ်မှရွေးချယ်လိုက်သော SubtitleNEXT -
ပင်မစာမျက်နှာ » 2015 » ဧပြီလ (စာမျက်နှာ 2)
လစဉ်မော်ကွန်း: ဧပြီလ 2015
Broadpeak အတူ Comigo အပေါင်းအဖေါ်များ Multiscreen ဗီဒီယိုန်ဆောင်မှုများအဘို့, အတွေ့အကြုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းတီဗီ Enhance မှ
အဆိုပါပေါင်းစည်းဖြေရှင်းချက်မှတဆင့် IPTV လုပ်ငန်းရှင်များ, တိုက်ရိုက် Multiscreen ဗီဒီယိုကယ်ယူထိရောက်စွာ-ကုန်ကျစရိတ် Viewer ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံရေးနှင့်လောင်စာဆီနယူးအခွန်ဝန်ကြီးဌာနအခွင့်အလမ်းများ RENNES, ပြင်သစ်နှင့် YARKONA, ဣသရေလအမျိုးကိုတိုးပှားစနိုင်သလား - ဧပြီလ 29, 2015 - Comigo, ဖြတ်တောက်-အစွန်း multiscreen တီဗီပလက်ဖောင်းတစ်ဦးပံ့ပိုးပေးသူ, နှင့် Broadpeak တစ်ဦးဦးဆောင် CDN နည်းပညာပံ့ပိုးပေး, ယနေ့ IPTV အော်ပရေတာမှတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှတီဗီန်ဆောင်မှုကယ်လွှတ်ခြင်းငှါခွင့်ပြုထားတဲ့ဘက်ပေါင်းစုံဖြေရှင်းချက်ထုတ်ပြန်ကြေညာ ...
VITEC ရဲ့ MGW Ace ကို Vegas မှာ Big ဆွတ်ခူး
ပထမနှင့်သာလျှင်အိတ်ဆောင် HEVC ဟာ့ဒ်ဝဲကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာမူလစာမျက်နှာပြရန်အကောင်းဆုံးနှင့် 2015 NAB ပြရန် SUNNYVALE, ကာလီဖိုးနီးယား မှစ. အယ်ဒီတာ့ဆုပေးပွဲယူ - ။ ဧပြီလ 29, 2015 - VITEC, အဆင့်မြင့်သည်ဗီဒီယိုကုဒ်ပြောင်းနှင့် streaming များဖြေရှင်းချက်အတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခေါင်းဆောင်, ယနေ့ယင်း၏ MGW Ace ကိုခရီးဆောင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် HEVC encoding ကနှင့် streaming များပစ္စည်းဟာ 2015 NAB Show မှာသုံးဂုဏ်သိက္ခာဆုဖမ်းမိ။ နှစျယောကျ ...
အဆိုပါနာမည်ပျက်စာရင်းက Short Anton / Bauer က Litepanels နှင့် OConnor Lists
ဂီယာကင်မရာဦးစီးဌာနရဲ့ချောမွေ့ထုတ်လုပ်မှု NEW YORK (ဧပြီ 29, 2015) ကူညီမည် - ရိုက်ကူးရေးအဲရစ် Moynier နှင့်မိုက်ကယ် Caracciolo အား NBC ရဲ့ shoot Anton / Bauer ဘက်ထရီ, Litepanels လ်တာနှင့် OConnor အရည်ခေါင်းပေါ်မှထောက်ခံမှုနှင့်တကွ, အဆိုပါနာမည်ပျက်စာရင်းစီးရီးကိုနှိပ်ပါ။ အများအားဖြင့်တည်နေရာပေါ်သေနတ် - မန်ဟက်တန်, ပြင် boroughs, Long Island တွင်နယူးယောက်ရဲ့ Rockland နှင့် Westchester ခုနှင့်ချယ်လ်ဆီး Piers ၏အဆင့်အပါအဝင် ...
ထုတ်လွှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ် OB ဗင်၏ပြီးပြည့်စုံသောမိသားစုတင်ဆက်
Bingen (ဂျာမနီ), 29 ဧပြီလ 2015 - အသံလွှင့်ဖြေရှင်းနည်း GmbH သည်ငါးကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းပါဝင်သော OB ဗင်၏အသစ်ပြီးစီးခဲ့်မိသားစုတွေ့ရမယ်။4ကင်မရာများမှ 16: အဆိုပါ်ထုတ်ကုန်မိသားစုငါးဦးကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းအတွက်လာ Pre-အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာ OB ဗင်ပါဝင်ပါသည်။ အားလုံး် OBs Pre-အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ကြပြီးနီးပါး "Off-the-ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း" တိုတောင်းတဲ့ကာလအတွင်းကယ်နှုတ်နိုင် OB ဗင် ...
ရှင်ပေါလု Babb သမ္မတ / MAXON အမေရိကန်၏ CEO ဖြစ်သူနှင့်အတူ Q & A
မေး: သင်ကာတွန်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်တယ်နှင့်မည်သို့ဒီဖန်တီးမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှ 3D tools တွေကိုမြှင့်တင်ပေါ်တွင်သင်၏အမြင် shaped ထားပြီးပုံကိုပြောပြပါ? PB: UCLA မှာဘွဲ့ရကျောင်းတွင်မတက်ရောက်နေစဉ်, ငါအများအပြားကြော်ငြာအေဂျင်စီများမှာ freelanced ။ ငါဒီဇိုင်နာနှင့် copywriter နှစ်ဦးစလုံးအဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သည်အခြားရေးရာထိန်းသိမ်းနေချိန်မှာကျောင်းဆင်းပွဲအပေါ်သို့ကျွန်မအလွတ်တန်းအားထုတ်မှုဆက်ပြောသည်။ ငါယုံကြည်တယ် ...
Vidcheck အရောင်းမန်နေဂျာအဖြစ်ဟင်နရီ Keyser ခန့်အပ်
Bristol ဗြိတိန်, 29 ဧပြီလ 2015 - Vidcheck, မီဒီယာဖိုင်တွေကိုအလိုအလျောက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ဆုံးမပဲ့ပြင်များအတွက် software ကို၏ဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေးဟင်နရီ Keyser အရောင်း Manager ၏ post မှရာထူးတိုးထားပြီးကြေငြာခဲ့သည်, ဗြိတိန် / Eire, MEA နှင့်အာရှ-Pac နှင့်ပေါ်ကြာ တိုက်ရိုက်ရောင်းချမှုနှင့်ထိုဒေသများအတွက်သွယ်ဝိုက်ရောင်းအားချန်နယ်များအတွက်တာဝန်။ Vidcheck CEO ဖြစ်သူသောမတ်စ်ချိုးငှက်ဟင်နရီသရုပ်ပြထားပါတယ် "ဟုပြောသည် ...
Plura စောင့်ကြည့် - ကယုံဖို့ကကြည့်ရှုပါ!
Plura အသံလွှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းမော်နီတာမှာသူ့ဟာသူအမည်တစ်ခုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ မော်နီတာသူတို့သို့သော်ပြုပါအားလုံးမဟုတ်, အဆိုပါ Las Vegas မှ NAB ရှိုးမှာသူတို့ရဲ့ NAB တဲ #N2718 မှာတစ်ချက် (အံ့သြဖွယ်အရည်အသွေးမြင့်လှည့်ကွက်ဆိုသော်ငြား) တစ်လှည့်ကွက်မြင်းအပေါငျးတို့သအယူအဆတွေပပြောကျသှားပါလိမ့်မည်။ တဲမှာ display ကိုတွင်ကဲ့သို့သော Non-မော်နီတာပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်: MTDoE တိုင်မားရန်အဘို့အ app တစ်ခု ...
ဒဏ္ဍာရီအသံအင်ဂျင်နီယာများ & ထုတ်လုပ်သူများတေးဂီတကမ္ဘာ့ဖလားနှင့်အတူသူတို့၏ကျွမ်းကျင်မှု Share ဖို့အွန်လိုင်းသင်တန်းများတိုးမြှင့်
Hal Leonard စာအုပ်များ, ဂီတစီးပွားရေး, အသံနည်းပညာနှင့်ဆက်စပ်အကြောင်းအရာများပါနှင့်, ကျော်ကြားတဲ့METAlliance®အုပ်စုတစ်စုအပေါ်စာအုပ်များနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာ၏ဦးဆောင်ထုတ်ဝေသူ, အကြားအရေးပါသောမဟာမိတ် - Hal Leonard နှင့် METAlliance Form ကိုမိတ်ဖက်အွန်လိုင်းပညာရေးဆိုင်ရာသင်တန်းများ MONTCLAIR, NJ Publish မှ ဂီတစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အများဆုံးအထင်ကရနှင့်တီထွင်ခဲ့တယ်အင်ဂျင်နီယာ / ထုတ်လုပ်သူများယနေ့ခြောက်၏စီးရီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပူးပေါင်းကြပါပြီ ...
2 ၏စာမျက်နှာ 55«12345 » 102030...နောက်ဆုံး»